dhageyso Gudiga Dastuurka Soomaaliya oo waxba kama jiraan ku tilaamay in la xaday Dastuurka Soomaliya.
Star FM May 16, 2018
Gudoomiyaha gudiga labada aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan dib u eegista Dastuurka qabyada ah Senetor Cabdi Xassan Cawaale Qaybdiid ayaa sheegay inaysn cidna ka aqbali doonin Dastuurka Soomaaliya in laga faafiyo waxyaabo been abuur ah sida in la xaday,waxka badal ay dad gaara ku sameeyeen iyo inuusan ka turjumayn danaha qaranka Soomaaliyeed.
Gudoomiyaha gudiga Dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Senetor Qaybdiid ayaa sheegay in xeerkaan ay soo ansixiyeen odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed uuna gacanta ku hayo gudoomiyaha golaha shacabka sidoo kale nuquladiisa loo qaybiyay dhamaan labada aqalka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Hadalka gudoomiyaha gudiga Dastuurka Soomaaliya Cabdi Xassan Cawaale Qaybdiid ayaa imaanaya xili todobaadyadii aan ka soo gudubnay si weyn la iskula dhexmarayay hadal haynta ku saabsan in nuqulka saxda ah ee Dastuurka Soomaaliya la xaday maadaama uu kal hore sidaas sheegay gudoomiye ku xigeenka koobaad ee baarlamaanka Soomaaliya C/wali Sheikh Ibraahim Muudeey.
← Waaxda FBI oo baaritaano ku sameynaysa shirkadda Cambridge
DHAGEYSO Dhalinyarada Soomaaliyeed oo loogu baaqay inay isbadal buuxa la imaadaan Sanad kadib. →
Dhageyso warka caawa 8:30PM October 17, 2018
Dhacdo layaab leh oo kadhacday dalka chiinaha. October 17, 2018
Wiil uu dhalay ganacsade can ah oo hal habeen kucasheeyay 80-kun oo Dolar October 17, 2018
Dad lagu laayay qarax ka dhacay gobolka Crimea ee Ruushka October 17, 2018
DHAGEYSO WARKA JUBALAND October 17, 2018
DHAGESYO WARKA WAJEER October 17, 2018
Ololaha talaalka cudurka dabeesha oo dhawaan ka bilaaman doono qaar ka mid ah ismaamulda dalka October 17, 2018
Dowlada Soomaaliya oo shir caalami ah uga qayb galaysa dalka Sudan. October 17, 2018
Ethiopian Airlines oo 40 sano kadib bilaabaysa duulimaadka Muqdisho iyo Adis-ababa. October 17, 2018
Wasiirada arimaha dibada Ethopia iyo Eritrea oo gaaray Muqdisho. October 17, 2018
Dhageyso warka caawa 8:30PM
Dhacdo layaab leh oo kadhacday dalka chiinaha.
Wiil uu dhalay ganacsade can ah oo hal habeen kucasheeyay 80-kun oo Dolar
Dad lagu laayay qarax ka dhacay gobolka Crimea ee Ruushka
DHAGEYSO WARKA JUBALAND
DHAGESYO WARKA WAJEER
Ololaha talaalka cudurka dabeesha oo dhawaan ka bilaaman doono qaar ka mid ah ismaamulda dalka
Dowlada Soomaaliya oo shir caalami ah uga qayb galaysa dalka Sudan.
Ethiopian Airlines oo 40 sano kadib bilaabaysa duulimaadka Muqdisho iyo Adis-ababa.
Wasiirada arimaha dibada Ethopia iyo Eritrea oo gaaray Muqdisho.